Kedu ụdị ihu igwe na Philippines? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Kedu ụdị ihu igwe dị na Philippines?
Gịnị bụ isi ihu igwe na Philippines?
Kedu ụdị ihu igwe mbụ na Philippines?
Philippines ọ na-ajụ oyi?
Kedu ihe bụ nri ụtụtụ Filipino na-ahụkarị?
Kedu oge kacha mma iji gaa Philippines?
Gịnị mere oyi ji dị na Philippines taa?
Kedu njikọ dị n'etiti oge na Philippines?
Kedu otu esi akọwa ihu igwe?
Philippines nwere ụdị ihu igwe ise: oke ọhịa mmiri ozuzo, oke mmiri ozuzo, savanna okpomọkụ, iru mmiri subtropical na oke osimiri (ha abụọ nọ n'ebe dị elu) nke nwere oke okpomọkụ, oke iru mmiri na oke mmiri ozuzo.
Ọnọdụ ihu igwe nke Philippines bụ okpomọkụ na mmiri. Eji mara ya site na oke okpomọkụ, oke iru mmiri na oke mmiri ozuzo. O yikwara n'ọtụtụ akụkụ n'ọnọdụ ihu igwe nke mba Central America.
Nkezi okpomọkụ na Philippines na-adịkarị n'etiti 21 Celsius (70 Celsius) na 32 Celsius C (90 Celsius F) na nkezi okpomọkụ kwa afọ na-abata na gburugburu 26.6 Celsius (79.9 Celsius F). Okpomọkụ nwere ike ịgbanwe n'etiti mpaghara yana dabere na oge, mana n'ozuzu Jenụwarị bụ ọnwa kacha mma ebe Mee bụ ọnwa kacha mma.
1 4 Ụdị ihu igwe na Philippines: Ụdị 1 - oge akọrọ site na December ruo May na oge mmiri site na June ruo November. N'ime ọnwa June ruo Septemba, oge mmiri ozuzo kacha. Ebe ndị nwere ụdị ihu igwe a na-ekpughere n'oge ọnwa ndịda ọdịda anyanwụ. … Ụdị 3- Oge adịghị nnọọ akpọ dịtụ akọrọ.
Nke a dị mkpa: Ajụjụ gị: Kedu ka m ga-esi nyere Vietnam aka?
January bụ ọnwa kacha oyi n'afọ na Philippines, afọ a abụghịkwa ihe ọzọ. Ụbọchị ole na ole gara aga hụrụ okpomọkụ na-agbada ruo ogo Celsius 22 na Metro Manila, nke na-eju oyi mgbe ị tụlere na obodo ahụ nwere ike iru ogo 38 ruo 40 ma ọ bụ karịa n'oge okpomọkụ.
Nri nri ụtụtụ ndị Philippines ọdịnala nwere ike ịgụnye pandesal (obere akwụkwọ mpịakọta), kesong puti (nke ọhụrụ, nke a na-emebeghị, chiiz Filipino na-acha ọcha, nke a na-esi na mmiri ara ara carabao eme omenala) champorado (porridge rice chocolate), silog nke bụ sinangag (osikapa eghe eghe) ma ọ bụ sinaing, na akwa e ghere eghe na anụ-dị ka tapa, longganisa, ...
Oge kacha mma iji gaa Philippines bụ n'oge oge ọkọchị n'etiti Nọvemba na Eprel, mgbe a na-enweta àgwàetiti ndị mara mma nke mba ahụ na ógbè ndị dịpụrụ adịpụ. Ọnwa ubu nke Mee na Nọvemba dịkwa mma, ebe ọ na-adịchaghị mma, mana ihu igwe ka mara mma.
Gịnị kpatara oyi? Mmiri mmiri ozuzo ma ọ bụ hanging amihan na-eme ka okpomọkụ daa ka ọ na-emetụta obodo ahụ. Ụlọ ọrụ Philippine Atmospheric, Geophysical, na Astronomical Services Administration (PAGASA) na-akọwa oke udu mmiri n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ dị ka "ifufe oyi si n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ."
Enwere oge abụọ na mba ahụ, ndị oge mmiri na oge ọkọchị, dabere na oke mmiri ozuzo.  Nke a na-adaberekwa na ọnọdụ dị na mba ahụ dịka mpaghara ụfọdụ na-enweta mmiri ozuzo n'ime afọ niile (lee ụdị ihu igwe).
Nke a dị mkpa: Ụmụ akwụkwọ Malaysia nwere ike ịpụ Malaysia ugbu a?
Ihu igwe bụ ngwakọta nke ihe na-eme kwa ụbọchị na ikuku anyị. Ihu igwe dị iche n'akụkụ dị iche iche nke ụwa ma na-agbanwe n'ime nkeji, awa, ụbọchị na izu. Ọtụtụ ihu igwe na-eme na troposphere, akụkụ ikuku ụwa nke kacha nso n'ala.
Ọ dị oke ọnụ ịgụ akwụkwọ na Thailand?
Kedu ụdị agwọ dị na Thailand?
Kedu ihe akara udo pụtara na Philippines?
Kedu ka Malaysia siri mepụta?
Kedu ụgwọ ọnwa dị elu na Philippines?
Ego ole ka ICU na-eri Singapore kwa ụbọchị?
Azịza kachasị mma: Onye mba ọzọ nwere ike ịnwe naanị ya na Philippines?